Jowle - Wikipedia
DAGMADA JOWLE EE GOBOLKA MUDUG.
Joqoraafi ahaan Bartamaha dalka Soomaaliya.
Dagmadani waxa ay ka tirsantahay maamul goboleedka Galmudug.
TAARIIKHDA DAGMADA JOWLE
Dagmadani waxa ay dagmonimo u tartantay sanadkii 1985tii xiligaas oo ay Dowladii Militariga ahayd go'aansatay in ay dagmooyin gobolada Galguduud iyo Mudug ka Tirsan loo aqoonsado dagmooyin.
Hadaba dagmooyinkaas waxa ay kala ahaayeen Xeraale,Balanbal, Galhareeri, iyo Jowle. Dowladii kacaanka ayaa u aragtay in dagmooyinka Xeraale iyo Jowle aanay Buuxin Shuruudihii la iska rabay, halka Galhareeri iyo Balanbal ay kasoo baxayn shuruudihii laga rabay.
Ka dib waxaa dhacday Dowladii kacaanka ahayd waxa uuna dalku noqday mid fowda ah oo ay dagaalada iyo is ugaarsiga beeluhu ku bateen. Markii Dowladii "TNG" lagu soo dhisay magaalada carte ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa la isku dayay in dagmanimada Jowle la aqoonsado xili la isku dayayay in gobolada dhexe degmooyin cusub loo sameey, waxaa dagmo loo aqoonsaday Guriceel.
Ka gadaal waxaa timid "TFG" oo uu madaxwayne ka ahaa Col. Cabdullahi Yuusuf Axmed Allaha u Naxariistee, waxaa la go'aansaday in dagmooyin gobolada Mudug iyo Galguduud ka tirsan la siiyo dagmonimo waxaana go'aankaas kusoo baxay 6 dagmo oo kala ahaa Ceelgaras, Guriceel, Xeraale, Baxdo oo ka tirsan gobolka Galguduud iyo Colguula iyo dagmada Jowle oo iyaguna ka tirsan gobolka Mudug. Waraaqadaas oo xafiiska madaxweynaha kasoo baxday 29kii bishii Juun sanadkii 2008dii ayaa lagu aqoonsaday dagmanimada Dagmada Jowle iyo deeganada kale ee aan kor kusoo xusay.
'XUDUUDAHA DAGMADA JOWLE'
Dagmadu waxa ay 50km u jirtaa magaalada Xarardheere waxa ayna ka xigtaa dhanka galbeed. Joqoraafi ahaan waxa ay dhacdaa dhanka Koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya. Dagmada dhanka koonfur bari waxaa ka xiga dagmada Ceeldheere, dhanka Waqooyi bari waxaa ka xiga Magaala Xeebeedka Hobyo, waqooyi galbeedna waxaa ka xiga dagmada Cadaado. Dhanka barina waxaa ka xiga magaalada xarardheere, dhanka galbeedna waxaa ka xiga dagamada ceelbuur ee gobolka galguduud. Sidoo kale dagmadu waxa ay dhanka koonfureed xad kala leedahay dagmada Galhareeri.
Dagmada Jowle waxa ay isku xirtaa gobolada Mudug iyo Galguduud. Hadii aad si fiican u fiiriso waxaad arkeysaa in dagmadu 70% ay u fiday dhanka Galguduud. Jowle waxaa hoos yimaada ku dhawaad 30 tuulo oo ku teedsan hareeraha dagmada.
'CIMILADA DAGMADA JOWLE'
Cimilo ahaan waxaa la sheegaa in aanu jirin xili ama jawi caan ah oo dagmadu kaga duwantahay dagmooyinka kale balse waa dhul hawd xigeen ah oo qani ku ah daaqa iyo xoolodhaqashada.
'XOOLAHA LAGA DHAQDO DAGMADA JOWLE'
Dadka deegaanka ayaa dhaqda dhamaan xoolaha ay caanka ku tahay Soomaalida sida Adhiga, Geela, lo'da, idaha, iyo fardaha oo meelaha qaar laga dhaqdo dagmada. Sida Bulshada Soomaalidu u badantahay waxa dagmada ku badan dhaqashada geela oo ah nimcooleyda loogu dhaqashada badanyahay gudaha dalka iyo deegaanada gobolka ay ka dagto Soomaalida. Lo' du sidaasi uma badna dhaqasho ahaan marka deegaanka la joogo balse wali dad ayay u tahay hanti ay naftooda iyo hormarka qoysaskooda ku maareeyaan. Adhigu isagu meel kasta oo dhulka Soomaalida ka tirsan waa nimcooleyda 2aad oo ay Soomaalidi dhaqdaan, adhiga markaan leeyahay waxaa soo galaya idaha oo isaguna ka tirsan bahda adhiga.
'DHUL BEEREEDKA DAGMADA JOWLE'
Dagmada Jowle ayaa leh dhul beereed aad u wanaagsan oo inta badan ay kasoo go'aan dalagyada ay ugu caansanyihiin xadhuudhka iyo Digirta. Waxaa kaloo ay caan ku tahay damada qaraha oo ay qayb ka mid ah Khudaarta ay Soomaalidu aadka u isticmaasho. Cimiladda oo si xumaaneysaa iyo deegaankii dunida oo dhan oo sii guroobaya ayaa sabab u ah in wax soo saarka beeraha uu yaraado. Jowle waxaa inta badan kusoo hoyan jiray dadka deegaanka ku teedsan oo nuuc walba leh, iyaga oo cuno usoo doonan jiray maadaama uu deegaanku ahaa barwaaqo bartamihii qarnigii ina dhaafay ee 20aad.
'DADKA DAGMADA JOWLE DAGGAN.'
Dagmadani dadka dagani waloow aanay jirin tiro koob sax ah haddana waa boqolaal kun oo qofoof. Waxa ay caan ku yihiin dadka dagmadani daggan nabadda iyo dariswanaaga oo ah wax ay inta badan ku caano maaleen waloow dad badani oo wax magarata ahi ay u arkaan in dariskaaga oo la wanaajiyo ay tahay caqli aad u foorara marka baadiyaha la joogo. Balse iyagu waa u dhaqan dadka halkan daggan mana baajiyaan caadadan soo jireenka ah oo ay ka dhaxleyn awoowayaashood.
Dagmada Jowle waxaa la isku dayay in magaca laga xoogo oo dad kale ay sameystaan magac dagmada oo kale. Tusaale waxaa jira tuulo ku magac ah dagmada Jowle oo ku taalada Gobolka Nugaal ee waqooyi bari Soomaaliya. Jowle waxaa gabi ahaanteed dagga Jufada Ibraahim Madar kicis "Saruur" oo ah Qabiil ka tirsan Habar-gidir Madar-Kicis,Hiraab, Hawiye.
Jowle waxa ay wali u fideeysaa si xoog ah deegaan ahaanna way ballaaraneysaa iyada oo dhul baaxad wayne ku fideeysa maadaama ay tahay dagmada ugu caansan ee Xarardheere ka ag dhaw.
'DHANKA WAXBARASHADDA DAGMADA.'
Dagmada waxaa ku yaala Iskuul hoose dhexe iyo saraba waxaana la yiraahdaa dugsiga hoose dhexe iyo sarre ee Jowle waxaana dhigata ardayda deegaanka walloow uu iskuul bilaaw uun yahay una baahanyahay taakuleyn dhinaca dhismaha ah iyo tan dhinac tacliinta ah.
'DHANKA GANACSIGA DAGMADA JOWLE.'
Dagmada ganacsi ahaan waxa ay ku tiirsantahay xoolaha nool. 85% dadka dagmada jowle waxa ay kunool yihiin hantida iyo dhaqaalaha ay ka helaan xoolahooda.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jowle&oldid=235533"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 May 2022, marka ee eheed 20:07.